Akhriso: Sababta Xaaf isku bedelay – Kismaayo24 News Agency
Akhriso: Sababta Xaaf isku bedelay
by admin 4th January 2020 0228
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle oo horey ugu dhawaaqay in Wasaarada arimaha gudaha iyo federaalka ku wareejiyay howlaha dib u dhiska Galmudug ayaa mar kale ku dhawaaqay in uu ka laabtay go’aankii hore.
Xaaf ayaa la sheegay in uu raali ka ahaa sida ay u socdaan dhismaha Maamulka Galmudug loo dhan yahay , hasa ahaatee Madaxweyne Xaaf ayaa mar qura is bedelay kana laabtay go’aankiisa kadib markii laga joojiyay lacag uu ka heli jiray dowlada federaalka.
Warqad kasoo baxday Xafiiska Hanti Dhowraha qaranka 18-kii bishii December ee sanadkii hore ayaa lagu hakiyay kharashaadkii dowlada siin jirtay maamulka Galmudug marka laga reebo mushaarka ciidamada iyo raashinka.
Hakinta lacagaha la siin jiray maamulka Galmudug gaar ahaan Madaxweyne Xaaf iyo xertiisa ayaa sabab looga dhigay kadib markii si khaldan loo maamulay lacag gaareysa 428-kun oo Dollar oo dowlada federaalka siisay maamulka Galmudug.
Go’aanka lacagaha looga hakiyay Maamulka Galmudug gaar ahaan Madaxweyne Xaaf ayaa la ogeesiiyay Madaxweynaha Soomaaliya, Gudoonka labada aqal ee Baarlaaanka federaalka iyo Ra’isul Wasaare Kheyre.
Sida aan wararka ku helnay Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Xaaf ayaa caro uu ka qaaday lacagaha sida khaldan uu u isticmaalayay isaga oon shaqo heyn laga joojiyay ayaa keenay go’aankan uu uga soo horjeestay dadaalada lagu dhisayo Galmudug .
Dhismaha maamulka Glamudug ayaa hada heer gabo gabo ah maraya, waxaana la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo aadan Guddiga doorashada Galmudug shaaciyaan Xildhibaanada Galmudug kuwaa oo iyana dooran doona Hogaanka cusub ee Galmudug.
Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle ayaan wax shaqo ah oo ku saabsan Galmudug qaban dhoorkii bil ee lasoo dhaafay, waxaana shaqadiisa heysay Wasaarada arimaha Guddaha uu wakiishay.
Halkan ka Akhriso Qoraalka Lacagta looga joojiyay Xaaf
Madaxweyne Xaaf oo fariin culus loodiray.
Jawaari Oo Xulafo Samaystay Iyo Khayre Oo 40 Wasiir Oo Xildhibaano Ah U Dagaalamayaan
Update: Kamaal guutaalle iyo Sayid Cali Macalin oo dib u helay xoriyaddooda Kadib markii….